XOG:- Tani ma wadadii Wasiir Beyle Ku bixi Lahaay baa ? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho ( Mareeg News ) Wasiirka maaliyada ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Beyle Ducaale ayaa wajahaya cadaadis dhinacyo badan, isagoo maalmo badan buuq kala kulmayay dadka reer Muqdisho ayaa hada waxaa ugu darsoomay xildhibaanada golaha shacabka.
Beyle ayaan caadiyan hor-dhigin golaha shacabka markii uu doonaayo inuu canshuur ku kordhiyo shacabka reer Muqdisho taas oo sharci daro lagu tilmamay, sidoo kale waxaa ay dadka reer Muqdisho ku doodayaan inaan waxba loogu qaban lacagta laga qaado.
Shalay waxaa uu Beyle hortagay golaha shacabka oo ay 155 mudane joogeen, waxaa uu Beyle aqriyay miisaaniyada Dowlada ee 2019 taas oo aan wali Baarlamaanku ansixiyeen.
Guddiga maaliyada ee Baarlamanka iyo xildhibaanada ayaa dib u celiyay wasiir Beyle waxaana lagu amray inuu soo cadeeyo saddex arrimood.
1-Shaqaaleysiinta: Xildhibaanadu waxey Beyle u sheegeen inuu miisaaniyada 2019 kusoo cadeeyo tirada shaqalaha la qaadan doono 2019 iyo qidmadooda.
2-Xisaabtii 2017: Waxaa wasiirka maaliyada la weydiistay inuu keeno xisaabka xirkii 2017, madaama ay jiraan tuhumo badan oo sheegaya in lacago la boobay.
3-Cadeynta korarka: Daqli korar ayuu sheegay wasiir Beyle waxaase ay xildhibaanadu sheegeen in loo baahan yahay in la cadeeyo meelaha uu ka yimmid daqliga kordhay, si looga badbaado in masuuliyada faan iyo been laga dhigo.
Arrimahan ayaa la sheegay iney culees ku abuureen wasiirka maaliyada ee Soomaaliya, waxaana la filaya iney mudo qaadan doonto jawaabaha saddexdaan arrimood. Wasiirka ayaa dib ugu soo laaban doona xildhibaanada.